New High Torque 16DCT Athlonix ™ I-Mini Motor - China Shandong Better Motor
Portescap wethula entsha 16DCT motor wayo ne-torque eliphezulu DCT uhla Athlonix izinjini. I 16DCT motor angabakhulula okuqhubekayo torque engu kuze kube 5.24 mNm ngesikhathi ubude 26mm kuphela.
I 16DCT isebenzisa enamandla Neodymium odonsa futhi Portescap Amandla kungase kutholakale kahle coreless design. I ubuhle ikhoyili ukuzisekela kuqinisekisa ukusebenza high eshiwo iphakethe compact, ukunciphisa izindleko sezizonke ubunikazi. Ngokuqhathaniswa motors ezifanayo emakethe, 16DCT has ephansi motor isiqondiso (R / K2) okusho it has a iconsi aphansi e ijubane umthwalo okwandisa. Lokhu kunikeza nenjini enamandla kakhulu iyatholakala onawo for inselele izidingo ezihlukahlukene lokusebenza nganoma. Lesi sici, kuhlangene kahle kuze kube-85%, kwenza 16DCT motor i ikhambi ekahle Abamangali ibhethri eziqhutshwa amathuluzi.
16DCT itholakala nge ensimbini eyigugu futhi graphite uguquko izinhlelo futhi ilungele izicelo ezifana amaphampu yezokwelapha nezezimboni, izidakamizwa kwezidingo izinhlelo, izinhlelo kunendawo enkulu engahlolwa amarobhothi (iminwe Bionic), amathuluzi amancane amandla zezimboni, imishini tattoo, mesotherapy izibhamu, amathuluzi okuxilonga amazinyo, ukubukela winders, futhi grippers ezimbonini. Ezinye izinhlelo zokusebenza okufaka ukuphepha nokubona ukufinyelela futhi amarobhothi humanoid ukuze akwazi ukwenza ezibukwayo usebenzisa 16DCT Athlonix motor.